Page2– "Rockin'-the-World" Music News!
မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Meghan Trainor
On January 16, 2019 By Kashia
All About The Bass သီချင်း နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ အမေရိကန် တေးရေးတေးဆို အဆိုတော်မလေး Meghan Trainor ဟာဆိုရင်တော့ သူလက်တွဲလာခဲ့တဲ့ ချစ်သူနဲ့ မကြာသေးခင်ကတင်ပဲ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ View this post on Instagram I’mawifey for lifey! Best birthday ever!!!!!! Thank you for everyone who […]
Featureshollywoodmarried newsLeaveacomment
ကမ္ဘာလှည့် ဖျော်ဖြေပွဲတွေ ကျင်းပတော့မယ့် BLACKPINK
On January 11, 2019 January 11, 2019 By Aminnyar
တောင်ကိုရီးယားက နာမည်ကျော် မိန်းကလေး K – Pop အဖွဲ့တွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးရောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက သူတို့ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် နှစ်သစ်မှာ သတင်းကောင်းတွေ ယူလာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒါက တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သိပ်မကြာခင် ကာလအတွင်းမှာ သူတို့တွေဟာ ကမ္ဘာလှည့် ဖျော်ဖြေပွဲတွေကျင်းပရင်း သူတို့ရဲ့ ပရိသတ်တွေ ရှိရာဆီကို အရောက်လာကြတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ BLACKPINK အဖွဲ့ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို စီမံခန့်ခွဲပေးနေတဲ့ YG […]
Music NewsBlackpinkgirl bandK-Poptour newsLeaveacomment
2019 – iHeartRadio Music ဆုပေးပွဲအတွက် ဇကာတင်စာရင်းများ ထွက်ရှိလာ
iHeartRadio Music ဆုပေးပွဲကြီးဟာ အခုနှစ်တွေ အတောအတွင်း သီချင်းချစ်သူတွေနဲ့ အဆိုတော်တွေကြားမှာ တော်တော်လေးကို အရေးပါလာပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အားပေးခံလာရပြီဖြစ်တဲ့ ဂီတဆိုင်ရာ ပွဲကြီးတစ်ပွဲ ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ပြီးတော့ ဒီပွဲကြီးက ချီးမြှင့်တဲ့ ဆုတွေဟာလည်း ဂီတပညာရှင်တွေအတွက် လိုချင်မက်မောစရာ၊ တောင်းတချင်စရာ ဖြစ်လာရပြီ ဖြစ်သလို၊ သူတို့ရဲ့ အနုပညာ လမ်းခရီးတစ်လျှောက်မှာ မှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ်လည်း အရေးပါလာခဲ့ရပါပြီ။ iHeartRadio ဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ iHeartMedia ရဲ့ […]
Music NewsAwardCelebrityiHeartRadio AwardsNomination ListPeopleVarietyLeaveacomment